Sidee Loogu Rakibaa Aagga Musqusha Meel Ficil Ah? Ka Bilow Afartan Dhinac, Si Aad U Xaqiijiso Fiirintaas Fiican Iyo Adeegsiga Wanaagsan!
Bogga ugu weyn / blog / Sidee Loogu Rakibaa Aagga Musqusha Meel Ficil Ah? Ka Bilow Afartan Dhinac, Si Aad U Xaqiijiso Fiirintaas Fiican Iyo Adeegsiga Wanaagsan!
2021 / 04 / 10 Qoondayntablog 1190 0
Naqshadeynta musqusha marka lagu daro sagxadda dhulka iyo derbiyada, xulashada berkadda, qolka maydhashada ee qorshaynaya muraayadda arrin muhiim ah! Si habboon loo qaabeeyey, labadaba qurux iyo shaqo kaydinta. Qorsheynta liidata waxay u horseedi kartaa caaryar, ma fududa in la dayactiro oo booska lagu keydiyo kuma filna. Waxyaabaha soo socda ee laga soo xulayo saxanka, qaabka kabadhka qubeyska, naqshadeynta muraayadaha iyo falanqaynta qurxinta nalalka, 4-ta mushkiladood ee waaweyn iyo tallaabooyinka looga hor-imanayo ee lagu bixinayo qoysaska waaweyn iyo kuwa yaryarba waxay khuseeyaan xirmada caajiska ah ee qurxinta saxanka!
Weelka lagu dhaqo si loo doorto miiska dushiisa, hoostiisa nooca dhismaha
ama qaabka saxanka saxanka?
1, tusaalayn culus, dad dadaal badan oo ku habboon: miisaska dushiisa
Features: naqshadda qaabka 100 dhibcood, oo ka hooseeya rakibidda kabadhka qubeyska, booska kaydinta, isbeddellada lakabyo badan oo habboon.
Fiiro gaar ah: balaadhka miiska dusha sare kuma habboona wax ka yar, rakibidda qasabada waa in lagu hagaajiyaa iyadoo la raacayo caadooyinka qofka ee dhererka isticmaalka, si looga fogaado kaarka gacmo-dhaqashada iyo dhibaatooyinka kale. Intaa waxaa dheer, maxaa yeelay way fududahay in la soo saaro nadiifinta dhammaadka meydadka, buufintu way fududahay in la ilaaliyo, ma fududa in la ilaaliyo dadaalka dayactirka nadaafadda.
2Clut Buuq badan, dadka caajiska ah oo ku habboon: hoosta nooca gundhigga ah
Features: jarista naqshadaynta miiska dusha sare waxay ka dhigaysaa miiska dushiisa mid aad u ballaadhan, laguna kaydin karaa aagga u muuqda mid ballaadhan, nadiifintiisuna ka yar tahay meelaha dhimman si loo fududeeyo dayactirka.
Fiiro gaar ah: cirifka tolida leh miiska dushiisa waa fududahay in la qariyo wasakhda, rakibaadda iyo dhismuhuna way dhib yar yihiin.
3, alaab ka yar, guri yar oo ku habboon: barkadda weelka / weelka darbiga la sudhay
Features: mashquuli aag yar si aad u badbaadiso boos fara badan, oo ku habboon pings yaryar, nus musqusha nuskeed, oo si sahlan loo rakibo oo loo nadiifiyo.
Fiiro gaar ah: Meel yar oo keydka armaajada musqusha waa tan ugu muhiimsan, oo loo baahan yahay in la mariyo khaanadaha kale ee lagu keydiyo derbiga, sida in la kordhiyo meelaynta alaabada musqusha.
Kaydinta musqusha waxay diirada saareysaa qolka qubeyska!
Furan ama qarsoon, midkee xulanaya?
1, walax yar, sida naqshad kaladuwan oo ku habboon: khaanadaha furan
Features: qaabka shelf shelf ee dhowr, waxaa loo isticmaali karaa dambiisha kala soocidda dabacsan oo si fudud u helaan.
Fiiro gaar ah: Haddii boosku yahay qoyaan culus, waxyaabaha kaydinta ayaa ka dhib badan in la ilaaliyo, waxaa jira meel qoyan oo qalalan oo ku habboon.
2Waxyaabo badan, sida dareen kooban oo nadiif ah oo ku habboon: kaydinta kabadhka madaxbannaan
Features: albaabada golaha wasiirada, khaanadaha khaanadaha, dhamaan walxaha oo nadiif ah oo hagaagsan, iyo awood keyd ah oo ku filan.
Fiiro gaar ah: u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato xulashada kabadhka iyo xaashida albaabka, waxaa lagugula talinayaa inaad xulato waxyaabaha biyuhu xiraan, si looga fogaado qoyaanka iyo caaryada. Inta badan armaajooyinka qubeyska badanaa waxay isticmaalaan sabuuradda biyuhu xireen ama iskuulada xumbada; Qalabka albaabka golaha waa guddiga xumbada iyo guddiga Menai oo ah kuwa ugu badan.
Muraayad lama huraan ah,
Xulista muraayadda, maxaa lagu talinayaa?
1, qaabeyn ama qaab la'aan
Asal ahaan, dadka badankood waxay dooran doonaan iyagoo ku saleynaya qaabka, haddii laga eego dhinaca dayactirka, nadiifinta iyo dayactirka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka aan qaabaysnayn ayaa ka habboon. Haddii aysan jirin astaamo qoyaan-caddeyn u ah waxyaabaha jirku leeyahay, way fududahay in la isticmaalo waqti lagu sii xumaado. Marka laga eego dhinaca bilicsanaanta, waxaa jira ikhtiyaarro badan iyo isbeddello qaab-dhismeedka ah, faa'iidooyin badan oo tusaalayaal ah.
2Maintenance Dayactirka muraayadda
Muraayadaha guud waxay leeyihiin shaqo-ka-hortagga ceeryaanta iyo miridhku, haddii hawo-mareenka musqusha uu liito ama goobta ay gaar ahaan qoyan tahay, waxaa lagu talinayaa in la iibsado filimka ceeryaanta ka hortagga ama wakiilka ka-hortagga ceeryaanta si loo xoojiyo.
3Size Cabbirka Muraayadda
Muraayad wareegsan, laba jibbaaran sida weyn, waxay ku saleysnaan kartaa cabirka dusha saxanka. Xulashada muraayadda laguma talinayo in la doorto cabbir ka badan saxanka, saamiga muuqaalka ayaa ah mid aan dheelitirnayn.
Nalalka gidaarka, muraayaddu waxay qurxiyaan qaabka musqusha,
Maxaa fiiro gaar ah u leh rakibidda?
Ka dib marka la go'aamiyo iftiinka aasaasiga ah ee musqusha, dad badan ayaa sidoo kale ku dhejin doona aaladaha aagga saxanka, derbiyada nalka loo yaqaan 'lahjadda lahjadda', iyagoo ku daraya qaabka booska.
Rakibaadda waxay u baahan tahay in la go'aamiyo dhererka iyo goobta ka dib marka la qodayo godadka si loo hagaajiyo laydhka derbiga iyo saqafka.
Feejignaan gaar ah waa in la siiyaa qaabka nalka, nalka tusaalaha iyo hooska, muraayada meesha u baahan in la tixgeliyo si looga fogaado inay saameyn ku yeelato khadka aragtida arooska kormeerka iyo jawiga nalalka qolka oo dhan.
Hore:: Dib-u-habeynta Musqusha, 5 Garaacis Si Loo Gaaro Isbadal Aad U Qurux Badan Next: Musqusha ku rakib shelf, musqusha isla markiiba ku noolow 5 mitir oo laba jibbaaran!